Public Service Engagement – U Kyaw Zin Oo – Director – Mon State Budget Department – Mawlamyine – Mon State – NEI – COVID Economic Relief Plan (CERP) | National Enlightenment Institute (NEI)
Public Service Engagement – U Kyaw Zin Oo – Director – Mon State Budget Department – Mawlamyine – Mon State – NEI – COVID Economic Relief Plan (CERP)
“မွန်ပြည်နယ်က လမ်းတွေကို နိုင်ငံတကာ အဆင့်မီ လမ်းတွေ ဖြစ်အောင် အဆင့်မြှင့်တင်တာတွေ ထပ်လုပ်သွားမယ်”
မွန်ပြည်နယ် အစိုးအဖွဲ့ဟာ အခုဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှာ ပြည်နယ်တစ်ခုလုံးအတွက် ဘတ်ဂျက်ရန်ပုံငွေ ကျပ် ၁၅၀ ဘီလီယံကျော်ကို သုံးစွဲဆောင်ရွက်သွားဖို့ ရှိနေပါတယ်။ အဲဒီဘတ်ဂျက်ရန်ပုံငွေကိုတော့ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်စေရေး၊ ကျေးလက်ဒေသနဲ့မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ လျှပ်စစ်မီး ရရှိရေးနဲ့ သောက်သုံးရေရှိရေးတို့မှာ အများဆုံး သုံးစွဲထားတာပါ။
လက်ရှိမှာတော့ ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါကြောင့် ပုံမှန်ဝင်ငွေ မရှိတဲ့ အခြေခံလူတန်းစားတွေကို ပြည်ထောင်စု အစိုးရရဲ့ အစီအစဉ်နဲ့ ထောက်ပံ့တာတွေ လုပ်ဆောင်ထားသလို ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါ ထိန်းချုပ်ကာကွယ်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာတော့ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ ရန်ပုံငွေတွေကို သုံးစွဲဆောင်ရွက်နေတာပါ။
တစ်ဖက်မှာတော့ ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါကြောင့် သက်ရောက်မှု ရှိနေတဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေ ပြန်လည် ဦးမော့လာဖို့နဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု စီမံကိန်းကြီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘာတွေ ကြိုတင်ပြင်ဆင်တာတွေ လုပ်ဆောင်နေလဲဆိုတာကို မွန်ပြည်နယ် ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးကျော်ဇင်ဦးနဲ့ တွေ့ဆုံ မေးမြန်းထားမှုကို ကောက်နုတ်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
“မွန်ပြည်နယ်က လမ်းတွေကို နိုင်ငံတကာ အဆင့်မီ လမ်းတွေ ဖြစ်အောင် အဆင့်မြှင့်တင်တာတွေ ထပ်လုပ်သွားမယ်”
မွန်ပြည်နယ် အစိုးအဖွဲ့ဟာ အခုဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှာ ပြည်နယ်တစ်ခုလုံးအတွက် ဘတ်ဂျက်ရန်ပုံငွေ ကျပ် ၁၅၀ ဘီလီယံကျော်ကို သုံးစွဲဆောင်ရွက်သွားဖို့ ရှိ်နေပါတယ်။ အဲဒီဘတ်ဂျက်ရန်ပုံငွေကိုတော့ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်စေရေး၊ ကျေးလက်ဒေသနဲ့မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ လျှပ်စစ်မီး ရရှိရေးနဲ့ သောက်သုံးရေရှိရေးတို့မှာ အများဆုံး သုံးစွဲထားတာပါ။
လက်ရှိမှာတော့ ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါကြောင့် ပုံမှန်ဝင်ငွေ မရှိတဲ့ အခြေခံလူတန်းစားတွေကို ပြည်ထောင်စု အစိုးရရဲ့ အစီအစဉ်နဲ့ ထောက်ပံ့တာတွေ လုပ်ဆောင်ထားသလို ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါ ထိန်းချုပ်ကာကွယ်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာတော့ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ ရန်ပုံငွေတွေကို သုံးစွဲဆောင်ရွက်နေတာပါ။
တစ်ဖက်မှာတော့ ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါကြောင့် သက်ရောက်မှု ရှိနေတဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေ ပြန်လည် ဦးမော့လာဖို့နဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု စီမံကိန်းကြီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘာတွေ ကြိုတင်ပြင်ဆင်တာတွေ လုပ်ဆောင်နေလဲဆိုတာကို မွန်ပြည်နယ် ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးကျော်ဇင်ဦးနဲ့ တွေ့ဆုံ မေးမြန်းထားမှုကို ကောက်နုတ်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
#Digital advocacy series to reinforce for the Covid Economic Relief Plan_CERP
#Public Service Engagement Interview
Objective: Policy Advocacy and social mobilization to use evidence-based information andareality check for the socio-economic development of the region.
#Specific Objective –
To identify and address the challenges COVID-19 impact on Positive and Negative externalities, and market access –
To assist the government in developing remedial plans to overcome COVID 19 impacts on socio economic sector.
#cooperated by_ #Consumer Affairs Department of Mon State under the #Ministry of Commerce